Prepress ပစ္စည်းစက်ရုံ | တရုတ် Pre ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း Prepress
APW-450 အလိုအလျောက် Flexo ပြားသန့်ရှင်းရေးစက်
၁။ လျင်မြန်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီးပန်းကန်ပြားများကို ၁၀၀% သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သောအချိန်တွင်ထားနိုင်သည်။ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ပူပြင်းသောလေမှိုခြောက်ပြီးနောက်ပန်းကန်သည် ၁၀၀% သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့ပြီးချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မြေတပြင်လုံး processonlytakesafewutes ။ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ APW-450 APW-650 အမြင့်ဆုံးအရှည် 450mm 650mm ဗို့အား 220V 220V အရွယ်အစား 2350 × 1100 × 1150mm 3370 × 1350 × 1150mm ...
CC-320-2000 စက္ကူ Core ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ CC-320-2000 Max ။ 2000mm Precision ± 0.1mm Power Supply Voltage 220V
CC-600 ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည်မြန်နှုန်းမြင့် Semi- အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်နိုင်သောပြွန်စက်ဖြစ်ပြီးဓားပေါင်းများစွာကိုဖြတ်နိုင်ပြီးလျင်မြန်ပြီးထိရောက်သော၊ လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သောဖြတ်တောက်နိုင်သောအကွာအဝေးကိုဖြတ်နိုင်သည်။ စက္ကူပြွန်၊ ပလတ်စတစ်ပိုက်၊ ကြေးတံဆိပ်နှင့်အခြားကွိုင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုပ်ခြင်း၊ တိပ်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များ CC-600 Core အကျယ် 10-600mm Core အချင်း 12-150mm နံရံအထူ 2-10mm Motor Power 11KW အဆုတ် 5kg / cm²အရွယ်အစား 1750 × 700 × 1500mm အလေးချိန် ...
pm-320 ပန်းကန် mounting စက်
၁။ ခိုင်ခံ့သောဘက်စုံကိုင်တွယ်မှုအပြီးတွင် wallboard ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူထိန်သိမ်းခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်မှုတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ 2. ၆၅၀ လိုင်းအရောင်မြင့်သောကင်မရာသည်အဆပေါင်း ၇၀ အထိချဲ့နိုင်သည့်အချိုးအစား၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်များကိုရရှိခြင်း၊ မြင့်မားသော resolution အချိုးအစားနှင့်ပန်းကန်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ ၃။ ပန်းကန် roller ဖွဲ့စည်းပုံကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ဂီယာမော်တာ၏မောင်းနှင်အားကိုထိန်းချုပ်သည်။ 4. အပြည့်အဝစက်ချမှတ် ...
pm-450 ပန်းကန် mounting စက်
၁။ ပလက်ဖောင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ လက်စွဲ prting plate၊ Cross-line alignment ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။ ၂။ အိနိ်္ဒယအောက်ရှိကင်မရာသည်အိန္ဒိယအိမ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလှိမ့်ချပြီးအိန္ဒိယလိပ်ကိုအစားထိုးရန်အတွက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံမှုကိုထိရောက်စွာသေချာစေသည်။ ၃။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုဖမ်းယူခြင်းစနစ်၊ ရုပ်ပုံကပိုမှန်တယ်၊ ဘုတ်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျကပ်ထားတယ်။ ၄ ။ ၅။ လှိမ့်သောဗားရှင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖြည့်သွင်းရန် ...
ACM-450 Anilox Roller Ultrasonic သန့်ရှင်းစက်
အမျိုးမျိုးသောထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ 1. စီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများ; 2. လုံခြုံပြီးထိရောက်သောသန့်ရှင်းရေး anilox roller; အပူနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်စနစ်ဖြင့် 3.Equipped; 4. ရေစိုခံလုပ်ဆောင်ချက်သည်အဓိကအားဖြင့်တိုးတက်ခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းကိုကြာရှည်ခံ။ လုံခြုံစေသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ACM-450 Anilox roller အရှည် 100-450mm တုန်ခါမှုပမာဏ 18pcs The Cleanser 40KHz လျှပ်စစ်အပူပေးစက်၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင် 2.6KW အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု ...
အမည်ဖော်ပြလိုသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Model Max ။ Load 300KG အမြင့်အမြင့် ၁၀၀ မှ ၁၂၀၀ မီလီမီတာအထိုး ၇၀ မီလီမီတာ * ၆၅၀ မီလီမီတာ (အချင်း * အရှည်) ခြေထောက်၏အတွင်းအကျယ် 850mm အရွယ်အစား 1050mm × 950mm × 1430mm Weight 75KG Video